အခေါ်အဝေါ်လေး သဘောကျလို့ပါ။ ဗြိတိသျှလိုတော့ ဘယ်လို ခေါ်တယ် မသိဘူး။ မောင်လူအေး ကျောင်းပြီးလို့ လုပ်ငန်းခွင် စ၀င်တော့ ဂျက်လိန် ငယ်နိုင်ကို စတွေ့ဖူးတာ။ မြောက်မြား လှစွာသော အဆောက်အဦးတွေ ဆောက်လုပ်ရာမှာ ဂျက်လိန် ငယ်နိုင်က အသံတိတ် ပါဝင်နေတဲ့ အလွန်တရာမှ အရေးကြီးတဲ့ လက်သုံး ကိရိယာ တစ်ခု။ သံကူကွန်ကရစ် မလောင်းခင် သံနန်းလုံး တွေကို သွပ်ရည် စိမ်ထားတဲ့ သံနန်းကြိုးနဲ့ ချည်နှောင်ရာမှာ သုံးတယ်။ သံနန်းကြိုးကို ကန့်လန့် ဖြတ်ထားတဲ့ သံနန်းလုံးနှစ်ခု ကို ပတ်၊ ပြီးတော့ လက်နဲ့ ဂျက်လိန် ငယ်နိုင် လျှိုလို့ရအောင် ကွင်းလေးလုပ်၊ ပြီးတော့ ဂျက်လိန် ငယ်နိုင် ရဲ့ ထိပ်က အကောက်လေးနဲ့ ချိတ်ပြီး လက်ကိုင်ကို သုံး၊ လေးပတ် လည်အောင် လှည့်ပေးရပါတယ်။ အဲလို လှည့်လိုက်တဲ့ခါ ခိုင်မာ ကျစ်လစ်တဲ့ သံချည်ကြိုးလေး ဖြစ်လာတယ်။ သံနန်းကြိုးကို လိုတဲ့ အခေါက်လေး ဖြစ်အောင် လွယ်လင့်တကူ ချည်နှောင် တုတ်နှောင်နိုင်လို့ သံကို ငယ်စဉ်တည်းက နိုင်တဲ့ သဘောနဲ့ ဂျက်လိန် ငယ်နိုင် လို့ သုံးနှုံးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
သံကူကွန်ကရစ် လောင်းဖို့ ဂျက်လိန် ငယ်နိုင်နဲ့ ချည်ထားတဲ့ သံနန်းလုံးမျာ
Filed Under : Knowledge, Sharing
Also visit my web blog ... http://alofokemusic.net/
clearness on your post is just spectacular and that i can assume you'reaprofessional in this subject. Well together with your permission
my web site: penpalspoint.com
you have any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.
my weblog http://www.maamysore.org
My page :: http://www.agryd.com/index.php?do=/blog/260931/spend-the-holidays-in-spain-in-the-forgotten-paradise-of-costa-brava/
Here is my weblog :: citygays.de
I as well as my buddies were found to be reading through the good secrets and techniques located
on your website and so before long gotahorrible feeling I
had not expressed respect to you for those secrets.
became for that reason warmed to read through
them and have in effect in fact been tapping into them.
Appreciate your getting really thoughtful and then for
picking varieties of fabulous subject areas most people
are really needing to be aware of. My very own sincere regret for
my blog post ... 4cd.com
I don’t care how you are going to do!